Minisitry ny Fiarovam-pirenena : “Tsy fahendrena ny fampiasan-kery amin’ny fitsaram-bahoaka” | NewsMada
Minisitry ny Fiarovam-pirenena : “Tsy fahendrena ny fampiasan-kery amin’ny fitsaram-bahoaka”
Mbola resaka tsy misy fiafarana ny amin’ny fitsaram-bahoaka. Tsy fahendrena ny fampiasan-kery amin’ny alalan’izany, raha ny nambaran’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena.
“Tsy toe-tsaina sy tsy fahendrena nolovaintsika tamin’ireo razambentsika ny fampiasan-kery amin’ny alalan’ny fitsaram-bahoaka. Melohin’ny lalàna izay rehetra tompon-kevitra sy nanatanteraka fitsaram-bahoaka.”
Io ny nambaran’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny jeneraly Rasolofonirina Béni Xavier, teny amin’ny toby Rezimanta miaramila voalohany (RM 1), Analakely, omaly. Na tsy nambaran’ny mivantana aza, mby ao an-tsaina amin’izany ny nafitsok’ireo polisy 40 mahery nandoro tanàna dimy ao amin’ny kaominina Befandriana Avaratra.
Na ny manatanteraka mivantana na ny maniraka ny fanaovana fitsaram-bahoaka, mbola melohin’ny lalàna ihany koa, araka ny nambarany. Tsy eken’ny fitsarana ny dina fikasihan-tanana, indrindra ny fanalana aina.
Mitodika manokana amin’ireo miaramila eo anivon’ny Foloalindahy izy: Malagasy isika; Malagasy iray ray, iray reny, fa tsy safiotra. Tsotra ny fahendren’ny Malagasy: mamy ny miaina; ny hery, tsy mahaleo ny fanahy; ny fanahy no maha olona.
“Aoka isika mba tena ho tandroka aron’ny vozona manoloana ny olom-pirenena malagasy: iray ray, iray razana amintsika”, hoy izy. Koa ampandeferina ny zavatra rehetra mety handatsaka aina.
Nasiany teny koa ny amin’ny fitodihana amin’ny fifankatiavana sy ny fifamelana mba hoentina mampandroso sy hiarovana ny firenena.
Sarotra ny hiverenan’ny fifampitokisana
Tena mbola mino ve ny vahoaka ifotony fa miaro ny vahoaka sy ny fananany ny miaramila, matoa miseholany ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa amin’izao fitondrana izao? Na to teny amin’izay lazainy sy ataony ny Foloalindahy…
Hatramin’izao, tsy manaiky ho diso ary tsy mahatsiaro ho tomponandraikitra amin’izany zava-mitranga izany ny eo anivon’ny fitondram-panjakana. Na ny fialan-tsiny na ny fankaherazana ireo niharam-boina aza, ohatra, tsy misy, na eo aza ny hoe fanolorana fanampiana.
Na ny fanoloana minisitra aza, lazain’ny fitondram-panjakana fa tsy misy ifandraisany amin’ny “Raharaha Befandriana Avaratra“. Hatraiza no hiverenan’ny fifampitokisana amin’izany?
R. Nd. / Sary : Mamiherison